Policing-so – Josh For Ward 6
Hay’adaha dib-u-eegista madaniga ah ayaa yimid oo tagay Magaalooyinka Mataanaha ah. Sanadkii 2012, Magaalada Minneapolis waxay ka takhalustay kormeerka rayidka iyadoo la doorbiday Xafiiska Dib u Eegista Habdhaqanka Booliska (OPCR).Hay’addan waxaa maamusha tallaabo kasta oo nidaamka socodsiinta cabashada ee shaqaalaha magaalada, oo ay ku jiraan booliisku. Sidaas darteed, hay’adani waxay edbisay 12 cabasho oo ka mid ah 2600 cabashooyin ay soo gudbiyeen xubnaha bulshada 7dii sano ee la soo dhaafay. Tani waa heer laga naxo 0.4% marka celceliska qaranka ee hay’adaha kormeerka rayidka ahi uu yahay 7-8%.
Guddiga Dib-u-eegista Arimaha Gudaha ee Boliiska Booliska ee St. Paul (CSARC) aad uma fiicna. Hay’addan ma qabato baaritaankeeda. Taabadalkeed, waxay si fudud dib-u-eegis ku sameyneysaa baaritaannada ay sameeyeen arrimaha gudaha. PCIARC waxay leedahay 3% heerka edbinta. Labada hay’adoodba waxay la kulmaan dhibaato dhisme oo dheeri ah. Markii mid uu dacwada u gudbiyo mid ka mid ah wakaaladaha, waxaad booliska uga dacwooneysaa booliiska. Tani waxay sidoo kale run u tahay bulshooyinka yaryar ee aan lahayn kormeer rayid ah haba yaraatee.
Xitaa marka kormeerka shacabka uu jiro, wakaaladan waxaa xayiray MN Statute 626.89, subd. 17 kaasoo odhanaya “Guddi dib u eegis rayid ah, komishan, ama hay’ad kale oo kormeer ah ma yeelan doonto awood ay ku ogaato xaqiiqda ama go’aaminta la xidhiidha cabashada ka dhanka ah sarkaal ama ku soo rogi ciqaab askar. Guddiga dib u eegista rayidka, guddiga, ama hay’ad kale oo kormeer ah ayaa sameyn kara talo ku saabsan mudnaanta cabashada; si kastaba ha noqotee, soojeedintu waxay noqon doontaa la talin oo keliya mana aha inay ku xaddidnaato ama kuma xadiddo awoodda sarkaalka sare ee fulinta sharciga ee waax kasta oo ka tirsan dowladda. ” Si loo gaaro kormeer rayid ah oo dhab ah, qaybtan waa in laga noqdaa.
Dadka hoyga la’aantu waxay ka dhigantaa 0.03% dadweynaha degmada Hennepin laakiin ku dhawaad ​​20% dadka ayaa lagu xiraa xabsiga Hennepin County, badanaa dambiyada lagu galo.
Iyada oo ay dhowr dhacdo oo aad u sarreeya ay ka dhacaan gudaha iyo dalka oo dhan oo ay ku lug leeyihiin bilayska. Aragtida dadweynaha ee booliisku waxay noqdeen kuwa aad u xun oo ay dadku si weyn uga caroodaan sida dib-u-eegis lagu sameeyo sida ay booliska uga shaqeeyaan waddankan iyo magaaladan. Xiisadda u dhexeysa booliska iyo muwaadiniinteeda maahan wax dhici kara.
Bilayska ilaa 9/11 waxaa lasiiyay qalab ay ku isticmaalaan aalado aysan horay u arag. Qalabka milatariga ee hore loogu talagalay dagaalka ayaa gaaf wareegaya waddooyinka. Wadooyinka Bulshadeena ma aha meel loogu talagalay qalabka militariga. Inta badan qalabkan, oo laga helay barnaamijka qalabka milatariga ee 1033 ee siyaadada ah. Tani waxay abuurtaa argagaxiso sida George Orwell ku qoray buugaagtiisa.
Canines waxaa sida ugu wanaagsan loo isticmaalaa si loo helo meela cararaya ama tuhmanayaal qarsoon. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray dhowr dhacdo oo shiraacyo ah oo lagu weerarayo laguna waxyeeleynayo dadka aan tuhmin. Kiisaska Frank Baker iyo Desiree Collins ayaa maskaxda ku soo dhaca.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ay jiraan warbixino baahsan oo ah in dadku lagu toogtay rasaas caag ah, buufin basbaas, bambaanooyin bambaanooyin iyo gantaallo kale iyo hubka kiimikada inta ay ku jiraan deyrarkooda, ama inta aad tabinaysid wararka.
Adeegsiga kooxaha SWAT si ay u adeegaan warqadaha ayaa kordhay 538% laga soo bilaabo 1980. Hadana waa dhif in xeeladooda la caddeeyo madaama inta badan adeegbixiyayaashu ay yihiin wax caadi ah oo aan qatar ahayn. Weerarada kooxda SWAT waxay si qoto dheer u dhaawacaan bulshada, gaar ahaan carruurta.
Magaalada Chicago waxay macluumaadka ku dhejisaa dacwado kasta boggooda internetka. Waxaan uqalnay isla helitaanka sahlan ee isla macluumaadka ee magaaladeenna.
Bulshadu waxay ku heli kartaa xogtan iyadoo la adeegsanayo codsiyo xog ah, laakiin waa inay ahaato mid si ballaaran looga heli karo iyada oo loo marayo meel marin looga helo. Si dhakhso ah u bixinta macluumaadkaan waxay wanaajin doontaa daahfurnaanta.
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax xadidan oo ah tirada saacadaha ay ku shaqeyn karaan saraakiisha heshiiska heshiiska gorgortanka wadajirka ah ama nidaamka MPD iyo habraaca habraaca. Daraasado badanMuuji in sarkaalka daalista uu caqabad ku yahay xukunka xukunka siyaabo horseedi kara shilalka baabuurta, kordhinta adeegsiga xoogga iyo jebinta anshax, awood yarida xakamaynta eexda iyo arrimaha kale ee amniga bulshada iyo arrimaha fayoobaanta sarkaalka. Arrimahani waxay kordhinayaan shaqaalaha isugeynta iyo sheegashada waajibaadka.
Dadweynaha ayaa ah ka-faa’iideystayaasha qandaraasyada lala galo hay’adaha shaqaalaha dowladda. Runtii tani waxaa ku jira qaybta Boliiska Minneapolis (MPD). Si kastaba ha noqotee, deganayaasha Magaalada looma ogola inay wax lug ah ku yeeshaan gorgortanka qandaraasyada lala galayo wakaaladan.
Tani waa si sax ah sababta ay Dawladda Hoose iyo Duqa magaalada ugu baahan tahay inay ku dadaalaan taxaddar ku saleysan mas’uuliyadooda iyo awoodda ay ku ansaxinayaan Heshiisyada Shaqaalaha, oo badanaa loo yaqaan qandaraasyo, oo ay la galaan Saraakiisha Saraakiisha Boliiska ee Minneapolis (Xiriirka). Waa inay fahmaan qandaraasku inuu yahay gaadiid loo baahan yahay si wax looga qabto welwelka ay dadweynuhu si isdaba joog ah u soo saareen oo ku saabsan la’aanta isla xisaabtanka bilayska, iyo in badan oo iyaga ka mid ahi ay waliba ku kaceen ololahooda.
Golayaashii hore ee Magaaladu waxay soo bandhigeen waqti kooban si ay u bixiyaan dib u eegis qoto dheer oo fikir ku dhisan baahida qandaraaska booliiska. Hadda, kooxaha bulshada ku saleysan ayaa geliyay shaqada xoog-u-yeelista ah si ay u dhalleeceeyaan qandaraasyada Magaalada ee ay hadda la gashay Isutagga Boliiska Minneapolis oo ay ku aqoonsadaan isbeddelada muhiimka ah. Waxaan rajeyneynaa in Golaha Magaalada iyo Duqa ay dib u eegaan isbedelada aan kugula talineyno oo ay daraasad ku sameyn doonaan Sababta Nidaamka Dadweynaha waxayna hubinayaan in isbedeladan ay noqdaan qodobada focal inta lagu guda jiro gorgortanka soo socda.
Nidaamka MPD iyo buugga hagista wuxuu xusayaa culeyska uu saaran yahay saraakiisha inay shaqadooda ku jiraan. Dhowr daraasadood ayaa muujinaya in ismiidaamintu ay tahay sababta kaliya ee ugu badan ee loo dhinto askarta bilayska, oo ah dhimashada ugu badan ee waajibaadka dhimashada.Hadana ma jiro wax shuruud ah oo loogu talagalay tijaabooyinka nafsaaniga ah ee caadiga ah ee heshiiska gorgortanka wadajirka ah ama buugga. Lahaanshaha askarta xoojinta sharciga oo ilaalinaysa bulshada qoryaha, iyadoo ay lajiraan dhibaatooyin caafimaadkooda maskaxeed, waa walaac weyn oo amniga bulshada ee bulshada. Qiimaynta joogtada ah ee cilmi-nafsi waa in ay ahaato dhakhaatiirta cilmi nafsiga shaqada. Arimaha caafimaadka maskaxda ma aha in lagu dhaleeceeyo ama lagu liqi karo maro hoostiisa laakiin waa in wax laga qabtaa lana daaweeyaa. Daaweynta waa in la bixiyaa iyada oo ay weheliso ka kaxaynta waajibaadka firfircoon haddii loo arko in ay lagama maarmaan u tahay daweyn ku guuleysata, diidmada daweynta waa in ay noqotaa sababaha joojinta.
Waxyaabaha Aan Shaqayn:
Sanadihii la soo dhaafay, CUAPB waxay baaris ku sameysay fikradda deganaashaha iyada oo ah shuruud ama dhiirigelin. Waxay rumeysan yihiin hababka ugu wanaagsan ee ku saleysan caddaynta ee dib-u-habeeynta booliiska. Daraasaddeena oo idil, weligood lama aysan soo qaadin caddeyn muujineysa in u baahan ama dhiirrigelineysa saraakiisha booliiska inay ku dhex noolaadaan bulshada ay ka shaqeeyaan wax saameyn togan ku leh tayada booliska.
Falanqaynta FiveThirtyEight waxay muujineysaa in magaalooyinka leh shuruudaha deganaanshahalahaan jireen “xoogag boolis ah [oo] aad ugu yar magaalooyin ahaan.” Xitaa markii loo xakameynayo isku xirnaanta isirka iyo qowmiyadaha iyo baaxadda kooxaha laga tiro badan yahay, shardi deganaansho ayaa la ogaaday inay tahay midda ugu badan ee ugu sarreysa heerarka liita ee tirada dadka la midka ah ee ku nool magaalada. Isla daraasadaas ayaa sidoo kale lagu ogaadey in “shuruudaha degenaanshuhu ay la xiriirto kalsoonida shacabka ee ku aaddan bilayska, gaar ahaan awoodda bileyska ee ah inay difaacdo muwaadiniinteeda.”
Tababbarka si loo yareeyo eexda ayaa ah qayb weyn oo ka mid ah dib-u-habeynta xoojinta sharciga. Haddana suugaanta sayniska ee laxiriirta tababarka eexda ee tilmaanta ah waxay muujineysaa in saameynta joogtada ah ee tababarka ay yihiin kuwo dayacan. Falanqaynta meta-2016 ee 17 daraasadood ee tababarkan Dr. Gene Borgida waxay muujisay inaysan jirin wax saamayn ah oo la qiyaasi karo oo ka soo baxday tababarka oo socday in ka badan 24 saacadood. Wuxuu kaloo xusey in mid kamid ah daraasadahaas uusan muujineynin wax saameyn ah ooxumeyn cad. Waxa waxbarashadiisu muujisay waa in tababarka eexda ee macquulka ah, sida hada lagu dhaqmo, ay tahay mid aan qiimo lahayn.
Booliska – Dadaallada Xiriirka Bulshada
Dadaallo aad u tiro badan oo dib-u-habeyn lagu sameeynayo xarun ku saabsan soo-jeedinta “xiriirka booliiska iyo bulshada.” Arinta salka ku haysa ayaa ah haddii booliiska iyo bulshada ay si uun wax u fahmi kareyso, kalsoonida ayaa la dhisi doonaa, dhibaatadaana la xallin lahaa. Xarig jarka wuxuu dhigayaa kalabar masuuliyada dhibaatada bulshada dhexdeeda, markii aan gacanta kuhayn karno howsha booliska. Tani waa xaraf been abuur ah.
Waxaan u baahanahay inaan caddaynno – arrinta ayaa had iyo jeer ahayd booliiska oo si xun u adeegsada awoodda, danaha ka hooseeya, iyo isla xisaabtanka oo dhiirrigeliya. Qaddar kasta oo ah ” wadahadal ‘ama tallaabooyin kale oo xiriir-dhisid ah ma hagaajineyso tan maxaa yeelay “xiriirada” maahan sababta dhibaatada. Sababta dhabta ahi waa isla xisaabtan la’aan. Ilaa iyo inta dadaallada laga beddelo “xiriirka booliiska iyo bulshada” lana xisaabtamo bilayska, dhibaatooyinkaas way sii socon doonaan. Xaqiiqdi, haddii booliiska lagula xisaabtamo wax qabadkooda qaabab macno leh hadda, akhlaaqda bileyska – oo ay kujirto dhacdooyinka xoogga dilaaga ah – aad bey u yaraanayaan xiriirka bulshada iyo bileyskuna kaligiis ayuu u hagaagayaa, iyada oo aan jirin dadaal gaar ah oo loo baahan yahay.
Soo jeedinta 1: Nadiifi haamaha
Dabka BOB KROLL
Dib u cusboonaysiinta habka shaqaalaynta iyo tababarka ee sababa tiro aad u badan oo tababar ah oo ah dib-u-dhac iyo tababar aan rabshad lahayn. Ka saar dhammaan tababbarradda ku lug leh xargaha
Ku-dhaqanka horu-marinta shaqaaleynta iyo tijaabinta si loo xaddido murashaxiinta ku tiirsanaanta rabshadaha iyo kuwa kale ee qatar gelinaya muwaadiniinta.
Samee dhamaan saraakiisha hadda shaqeeya ee Qeybta Boliiska Minneapolis waa iney maraan nidaamka cusub si ay usii wadaan shaqadooda firfircoon.
Soo-jeedinta 2-aad: Wadahadal qandaraas Boliiska Midowga Boliiska
Jooji daalka xafiiska
Baadhitaannada Caafimaadka Maskaxda ee khasabka ah
Shaqaale Dabacsan Kusii Badanaanta
U hogaansanaanta Axdiga Magaalada ee Minneapolis
U hogaansanaanta Sharciga Gobolka ee Mas’uulka Mas’uulka ah
Go’aannada tababbarka sida Xuquuqda Maareynta
ILAALINTA WAQTI QARANKA EE QOFKA
Dib-u-habaynta (JOOJINTA FARSAMADA): – Jaangooyooyinka iyo anshax-marinta
48-SAAXDA SAACAD EE KHUDBADAHA LAGU SAMEEYO
Ku-meelaynta kiraysiga cusub ee qiimayaasha MPD
Heerarka Shaqaale kormeerka
Tijaabada Daawooyinka loo yaqaan ‘Anabolic Steroids’
Caymiska Mas’uuliyadda Shaqsiyeed
Soojeedinta 3: Difaaca iyo Dib udajinta
50% ama BUST; Muddo afar sano ah waxay leeyihiin miisaaniyad sannadeedka booliisku ugu yaraan ugu yaraan heerka ay haatan marayaan.
U qoondee maalgelinta Kooxaha Dhibaatooyinka Caafimaadka Maskaxda.
U qoondee maalgalinta waxqabadka bulshada ee ku aaddan ilaalinta bulshada.
U qoondee maalgelinta ballaarinta adeegyada hoylaawe.
3.5 U qoondee maalgalinta adeegyada bulshada ee la balaariyey ee magaalada iyo marin u hel xarumaha xarumaha dakhligoodu hooseeyo iyo xaafadaha laga tirada badan yahay.
 Maxay qaadan doontaa in la joojiyo Rabshadaha Booliiska CUAPB 2020
George Orwell wuxuu qoray buugga 1984 ku saabsan mujtamac dystopian ah. Inbadan waxay moodayaan inaan kudhaceyno isla waxyaabihii uu buugga ku xusay. Kadib doorashadii madaxtinimada ee 2016, iibinta buugga waligeed lama arag heerar.
 ‘Iftiimin’ Em Up! ‘: Fiidiyowga Wuxuu Muujinayaa Inuu Muujinayo Sharciga Fulinta Xannaano Rinjiyeynta Xilliga Rinjiga ee Mpls. Deganeyaasha Wadooyinkooda
 Eeg 1, laakiin sidoo kale Wariyaha CNN ayaa si toos ah hawada loogu xiray, Warbixintii Louisville Report ayaa si toos ah hawada looga saaray,
 Maciag, M. Oktoobar 2017. Cawaaqib xumada ka dhalanaysa Shaqada Booliska ee Waqti Dheer. Governing.com
 DIIWAANGALINTA ISBEDELKA HESHIISKA SHAQAALAHA EE KA MID AH MAGAALADA MINNEAPOLIS iyo SIYAASIINTA SIYAASADA XUKUUMADA MINNEAPOLIS
 Heyman, M., Dill, J., Douglas, R. Ruderman Waraaq Cad oo ku saabsan Caafimaadka Maskaxda iyo Isku-duwaha Jawaabayaasha koowaad. Abriil 2018.
 Shuruudaha Degenaanshaha Dib-u-eegista ee Saraakiisha Boliiska